juillet 2017 – filazantsaramada
« Mihevera, ka mitandrema hianareo, fandrao azon’ny masirasiran’ny Fariseo sy ny Sadoseo. » Matio 16:6 Raha nikasika ny lamban’i Jesosy ilay vehivavy narary dia sitrana. Mifindra na dia amin’ny lamba aza ny fahamasinana. Fantantsika ny Teny hoe « Manamasina azy amin’ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana. » Jaona 17:17. Koa ny fifaneraserantsika amin’ny Tenin’Andriamanitra dia manamasina antsika. Toy izany […]
Publié parfilazantsaramada juillet 31, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY MASIRASIRAN’NY FARISEO SY NY SADOSEO.
« Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. » I Jaona 1:9 Ny eo amin’izao tontolo izao; rehefa nanao ratsy dia asiana ratsy, ary raha ny saina tsotra dia izany no rariny. Kanefa noho i Jesosy, raha mifona sy miverina amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada juillet 21, 2017 septembre 13, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FAMELAN-KELOKA ATAO INONA?
« Raby, aiza ianao no mitoetra? Hoy Izy taminy: Avia fa ho hitanareo. » Jaona 1:38b-39a – Fanontaniana nataon’ireo mpianatr’i Jaona roa lahy tamin’i Jesosy io. Matoa voalaza eto fa mpianatr’i Jaona izy ireo dia efa nianatra tamin’i Jaona. Eo ambony moa dia voalaza fa notondroin’i Jaona tamin’izy roa lahy Jesosy: «indro ny zanak’ondrin’Andriamanitra». Raha nanaraka an’i […]
Publié parfilazantsaramada juillet 18, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IO FIANTSOANA IO
« Midira amin’ny vavahady ety hianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka izay mankany amin’ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa ety ny vavahady, ary tery ny làlana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. » Matio 7:13-14. Isika olombelona dia voasintona hatrany amin’ny zavatra mora atao, mandeha amin’ny làlana malalaka, amin’ny làlana mora […]
Publié parfilazantsaramada juillet 7, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur SAFIDY SAROTRA
HAFA IHANY NY MIANKINA AMIN’NY TENA RAY
« Aoka isika hihinana sy hifaly; fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray. Dia nifaly izy. » Lioka 15: 23b-24 Teny nataon’ilay ray niteraka zanaka roa lahy, rehefa niala teo anatrehany ny faralahy nefa niverina teo aminy indray. Tao anatin’ny fanoharana nataon’i Jesosy izany. Rehefa niala ity zanaka lahy […]
Publié parfilazantsaramada juillet 4, 2017 septembre 13, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur HAFA IHANY NY MIANKINA AMIN’NY TENA RAY